- Oromo edition # 5
Gooftaa Keenya isa Qajeelummaa Waaqayyoo ta'e ( I )
ISBN : 9788928230563
Qajeelummaa Waaqayyoo akka ergaa gara warra Roomaa keessatti mul'ifame.
Barreessaan kitaaba kanaa dhaabbata Ergama Jireenya Haaraa dhaabee wangeela bishaaniifi Hafuuraa isa qajeelummaa Waaqayyoo akka ta’utti ibsu guutummaa biyya lafaan kan qaqqabsiise dha. Hojiin isaa kun gara Afaanota addaaddaa 76 oliitti hiikamee biyyooleessa 160 ol kan ta’anitti raabsamee jira. Luba Yoongii fi hidhattoonni hojii isaatii barsiisa qajeelummaa Waaqayyoo isa gara eebba waan hundumaatti nama geessu guutummaa biyya lafaatti karaa kitaaba kanaa ga’aa jira. Barsiisa kitaaba kanaa irratti hundooftee Gooftaa Yesuusitti amantee dhiifama cubbuu fudhattee jireenya barabaraa akka argattu sin affeera.
Oromo edition 5